लकडाउन खुकुलो पार्ने कि फेरि कडाइ गर्ने? :: Setopati
लकडाउन खुकुलो पार्ने कि फेरि कडाइ गर्ने?
सेतोपाटी जेठ १
चीनको वुहानस्थित याङ्जी नदी किनारमा मास्क लगाएर डान्स पार्टी गरिँदै। तस्बिर: वासिङ्टन पोस्ट
हामीकहाँ यही जेठ ५ गतेबाट कोरोना लकडाउन सकिँदैछ। त्यसपछि लकडाउन थप्ने कि नथप्ने, थप्ने भए अहिलेभन्दा खुकुलो पार्ने कि संक्रमित संख्या बढेसँगै थप कडाइ गर्दै जाने भन्नेमा बहस जारी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्ने हो भने लकडाउन खुकुलो पार्ने र कडाइ गर्दै जाने दुवै अभ्यास लागू गरिएको पाइन्छ।
अमेरिका लगायत संसारका विभिन्न मुलुक लकडाउन खुकुलो पारेरै कोरोना भाइरससँग लड्न खोजिरहेका छन्। महामारीबीच पनि अर्थतन्त्र गतिशील राख्न अमेरिकाका थुप्रै राज्यले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेका छन्। यही बेला केही देशले भने संक्रमित संख्या बढेपछि खुलिसकेको बजार पनि बन्द गरेका छन्।
लेबनानले लकडाउन खुकुलो पारेको दुई सातापछि मंगलबारबाट फेरि कडान थालेको छ। खुकुलो पार्दा संक्रमण वृद्धि भएपछि फेरि कसिलो पार्ने नीति लिइएको वासिङ्टन पोस्टले जनाएको छ।
त्यहाँ पछिल्ला चार दिनमै १०४ जना नयाँ व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसअघि दिनको एक वा दुई जना बिरामी देखिएको सानो मुलुकका लागि यो ठूलो संख्या हो।
नयाँ बिरामी बढेपछि लेबनान सरकारले भाइरस परीक्षण र बिरामीलाई आइसोलेसनमा राख्न पर्याप्त समय होस् भनेर चार दिन देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको छ। यसबीच संक्रमित संख्या वृद्धि हेरेर थप निर्णय लिने त्यहाँका सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन्।
संक्रमण पुष्टि भएका अधिकांश नयाँ बिरामी पछिल्ला केही सातायता संसारका विभिन्न मुलुकबाट लेबनान आएका थिए।
नेपालमा पनि केही दिनयता धमाधम नयाँ बिरामी भेटिन थालेका छन्। अहिलेसम्म २४६ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। खुला सीमा हुँदै भारतबाट प्रवेश गर्नेमा बढी संक्रमण पाइएका छन्।
‘थपिएको अवधिमा संक्रमण कसरी नियन्त्रण गरिन्छ र लकडाउन अन्त्यपछि फेरि संक्रमण फैलिन नदिन के–कस्ता उपाय चालिन्छ भन्नेले अबको सफलता निर्धारण गर्नेछ,’ बेरुतको रफिक हरिरी विश्वविद्यालय अस्पतालमा कोरोना भाइरस उपचारमा संलग्न फिरास अबियादले भने।
उनका अनुसार, लकडाउन महामारी नियन्त्रण गर्ने माध्यम हो, अन्तिम अस्त्र भने होइन।
‘लकडाउन गर्दैमा महामारी नियन्त्रण हुने होइन,’ उनले भने, ‘यसले हामीलाई कोरोनासँग लड्न तयारी गर्ने समय दिन्छ। यो अवधिमा हामीले त्यस्ता सबै तयारी पूरा गर्नुपर्छ, जसले भोलि संक्रमण फैलिँदा बिरामी उपचार गर्न र आइसोलेसनमा राख्न कुनै असुविधा नहोस्।’
एसियाका अन्य मुलुकमा पनि लकडाउन खुकुलो वा फिर्ता लिएपछि संक्रमण बढेको पाइएको छ।
सबभन्दा ज्वलन्त उदाहरण दक्षिण कोरिया हो, जसले सुरूदेखि व्यापक परीक्षण गर्नुका साथै सामाजिक दुरी कडाइसाथ लागू गरेको थियो। यहाँ आवागमन निषेध नगरिए पनि बाक्लो जमघटमा रोक लगाइएको थियो। बार, रेस्टुरेन्ट र क्लबहरू बन्द गरिएका थिए।
सुरूदेखि चनाखो भएर काम गर्दा दक्षिण कोरियामा लामो समय नयाँ बिरामी देखिएको थिएन।
गत साताबाट बार, रेस्टुरेन्ट र क्लबहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएपछि भने कोरोनाका नयाँ बिरामी फेला पर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय भेटिएका सय जनाभन्दा बढी नयाँ बिरामी क्लब र बारबाटै संक्रमित भएको पाइएको छ।
लेबनानको बेरूतस्थित फलफूल तथा तरकारी बजार। तस्बिर: वासिङ्टन पोस्ट
उता, जर्मनीले महामारी सुरू भएयता आफूलाई भयावह संक्रमणबाट बचाउँदै आएको थियो। कोरोना नियन्त्रण गर्न युरोपमै उदाहरणीय मानिएको जर्मनीले केही ठाउँमा संक्रमण फैलिएपछि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।
‘हामी महामारीको सुरूआती चरणमै छौं,’ केही सहरमा नयाँ कोरोना बिरामी देखिएपछि जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले गत साता सबैलाई सचेत गराउँदै भनेकी थिइन्, ‘यो भाइरससँग लड्न हामीले लामो यात्रा तय गर्न बाँकी छ।’
युरोपकै कतिपय मुलुकले भने नयाँ संक्रमित वृद्धि भए पनि लकडाउन खुकुलो पार्दै जाने नीति लिएका छन्। भारत र रूसले पनि मंगलबारबाट लकडाउन लचिलो पारेका छन्। यी दुवै मुलुकमा संक्रमण फैलिने क्रम थामिएको छैन। रूसमा दुई सातायता दिनकै १० हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन् भने भारतमा २–३ हजारका दरले बढेका छन्।
इरानलाई कोरोना महामारीमा मध्यपूर्वकै केन्द्रविन्दु मानिन्छ। यहाँ अहिलेसम्म १ लाख १० हजारभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। बीचमा महामारीको प्रकोप कम नभए पनि मृत्युदर घट्दै गएपछि सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेको थियो। यो साताको अन्त्यबाट स्कुलहरू समेत पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी छ। यति हुँदाहुँदै नयाँ बिरामी देखिन थालेपछि इरान सरकारले दक्षिण–पश्चिमी प्रान्तमा नयाँ चरणको लकडाउन आदेश जारी गरेको छ।
अहिलेको समय कुनै पनि ठाउँलाई कोरोनामुक्त छ भनी निर्क्यौल गर्न कति कठिन छ भन्ने चीनको वुहानले देखाउँछ।
महामारी सुरू भएको वुहानमा पाँच सातापछि छ जना नयाँ बिरामी फेला परे। त्यसलगत्तै चीनले वुहानका १ करोड १० लाख जनसंख्या सबैमा कोरोना परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ। एउटा पनि बिरामी नदेखेपछि लकडाउन अन्त्य गरेको वुहानमा खुकुलो पार्नासाथ नयाँ संक्रमित फेला परेको थियो।
‘केही बिरामीमा यो भाइरसको चक्र ३० देखि ५० दिनसम्म रहने देखिएको छ,’ चीनको रोग नियन्त्रण तथा निवारण केन्द्रका प्रमुख सरुवारोग विशेषज्ञ वु झुन्योले भने, ‘रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका बिरामीमा भाइरस संक्रमण लामो समय रहन्छ।’
उनले अगाडि भने, ‘तीन महिनाको अथक प्रयास, निषेधाज्ञा र उल्लेखनीय संख्यामा परीक्षण गरेर हामी यो महामारी नियन्त्रण गर्न सफल भएका थियौं। अहिले नयाँ बिरामीमा संक्रमण देखिएपछि अब दोस्रो चरणको महामारी फैलिन नदिन हामी सजग छौं।’
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ १, २०७७
तनहुँमा ६७ वर्षीया वृद्धाको हत्या, एक जना पक्राउ
जाजरकोटमा कुटपिटबाट युवकको मृत्यु